BERBERA, Somaliland- Maamulka Somaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay shirkada DP World Dekadda maamulka dekedda Berbera kadib hishiis 25 sano ah oo sannadkii hore labada dhinac kala saxiixdeen.
Xaflad maanta lagu qabtay gudaha dekedda ayaa Madaxweyne Siilaanyo kusoo dhaweeyay tallaabada Shirkadaas kula wareegtay dekadda, wuxuuna xusay in tartan ganacsi uu ka taaganyahay Geeska Africa.
Qorshahan Dekedda Berbera ayuu xusay in faa'iido weyn ugu jirto dhalinyarada Somaliland ee la dhibaatoonaya shaqo la'aanta.
Siilaanyo ayaa qiray in xukuumaddiisu ay dedaal dheer u gashay maalgashiga dekedda Berbera iyo ballaarinteeda oo wax weyn ka tari doonta sida uu hadalka u dhigay nolosha iyo dhaqaalaha shacabka Somaliland.
Guddoomiyaha shirkaddaasi Suldaan Axmed oo hadlay ayaa isaguna soo dhaweeyay hishiiska labada dhinac, wuxuuna xusay in shirkaddan mudada ay gacanta ku hayso Marsada Berbera wax weyn kusoo kordhin doonaan.
Bilowgii hishiiska labada dhinac waxaa kasoo horjeestay shacabka magaalada Berbera inkastoo markii dambe arrintaas la dhameeyay.
Muuse Biixi ayaa hadalka uu jeediyey ku sheegey iney istaageen wadahadalkii u dhexeeyey...